မြန်မာပြည်လူဦးရေ၏ ၁၅. ၈ သန်းကျော် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အခြေအနေတွင် နေထိုင်နေရ – Myanma Daily
မြန်မာပြည်လူဦးရေ၏ ၁၅. ၈ သန်းကျော် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အခြေအနေတွင် နေထိုင်နေရ
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြုစုထားသော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အခြေအနေ လေ့လာစီစစ်ချက် အစီရင်ခံစာ ဒုတိယတွဲအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်ရဲနွမ်းပါးသည့် လူဦးရေ ၁၅ သန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေးကို ၅၀.၂ သန်းကျော်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အချိုးအစားမှာ လူဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
သို့ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၈.၂ % မှ ၃၂.၁ % သို့ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ဘဏ်က ဆိုသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သော အသက်အရွယ်ရှိသူ နည်းပါးပြီး မှီခိုသူများပြားသည့်အပြင် အိမ်ထောင်စုများ၌ ၀င်ငွေရှာဖွေပေးနိုင်သည့် မြေယာနှင့် လယ်ယာသုံးပစ္စည်းကဲ့သို့သော အရင်းအနှီးနည်းပါးကြောင်း အဆိုပါ စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မဇ္စ်ျိမစီးပွားရေးသတင်းထောက် ကိုကောင်းဆက်နိုင်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအခြေအနေလေ့လာစီစစ်ချက်အစီရင်ခံစာ ဒုတိယတွဲကို ကိုကားဖော်ပြထားသည်။